Vaovao - inona ny tombony sy fatiantoka ny tavoahangy PLA sy PET amin'ny famenoana ny indostria?
Inona no tombony sy fatiantoka ny tavoahangy PLA sy PET amin'ny famenoana ny indostria?
Miorina amin'ny olan'ny fanasarahana ny fako, ny vidiny ary ny fiarovana ny tontolo iainana, ny tavoahangy PLA no lohalaharana amin'ny indostrian'ny zava-pisotro?
Nanomboka tamin'ny 1 Jolay 2019, Shanghai, Shina dia nanatanteraka ny fanasarahana fako tena henjana. Tany am-piandohana dia nisy olona teo akaikin'ny fitoeram-pako izay nanampy sy nitarika ny fanasarahana marina, mila manasaraka ireo azo ampiasaina, fako ao an-dakozia, fako hafa, fako mampidi-doza sns.
Avy amin'ny olan'ny fisarahana fako tsy maintsy atao, aiza no alehan'ny tavoahangy zava-pisotro samihafa? Avy amin'ny fanontaniana sy valiny mafana indrindra momba ny quora, maninona no tsy manamboatra tavoahangy rano / soda / ronono avy amin'ny PLA izy ireo?
Araka ny fantantsika, ireo tavoahangy fisotroana dia vita amin'ny PET, PP, PE, PC. Ny tavoahangy misy rano mineraly sasany, ambanin'ny mari-pana avo sy ny asidra, toy ny rano mafana, asidra, plum marikivy, vinaingitra, sns. Ny tavoahangin-drano mineraly dia matetika ampiasaina amin'ny fotoana iray. Recyclable fa tsy simba mandritra ny taona an-jatony.
Ny tavoahangy PLA dia ho simba ao anatin'ny 50 taona amin'ny toe-javatra voajanahary. Ny crystalline PLA, ny zavatra tokana azo ampiasaina amin'ny fampiharana fifandraisana amin'ny sakafo, dia mitaky fananganana composting (hydrolisis) hanamboarana ny firafitra. Izy io dia navadika ho CO2 sy rano mamela manodidina ny 20% ny lanjany tany am-boalohany, fa ny vokatr'izany dia manome firafitra fotsiny ho an'ny zezika ary tsy misy otrikaina. Fanariana mahomby io fa tsy fanodinana.
Raha isaina tamin'ny famokarana 500000, ny vidin'ny alim-piainan'ny biby 21 gram dia 0,041 dolara amerikana.
Ny vidin'ny preform PLA 21 grama dia $ 0,182. Ny vidiny roa dia tsy mitovy amin'ny 4,5. Manoloana ny elanelam-bidiny toy izany, firy ny mpanamboatra zava-pisotro mahavita azy?
Amin'ny maha mpanamboatra indostria famenoana zava-pisotro azy, Higee Machines （Shanghai） Co., LTD dia afaka manome ny tsipika feno manomboka amin'ny fanaovana tavoahangy, fanasan-tavoahangy fanasan-tavoahangy ary fametahana labozia mandra-pahatongan'ny famonosana farany. ny preform amin'ny karazan-tavoahangy endrika rehetra. Ny tavoahangy dia mankanesa any amin'ny milina fanasan-damba monoblock 3 amin'ny 1. Mety ve ny tavoahangy PLA amin'ny dingana rehetra mihazakazaka ao amin'ny masinina famenoana tavoahangy 3 amin'ny 1?
Inona no tombony sy fatiantoka ny tavoahangy PLA sy PET amin'ny famenoana ny indostria? Firenena iza no mampiasa tavoahangy PLA bebe kokoa? Tongasoa eto mba hizara ny hevitrao amin'ny mailaka admin@higeemachine.com sy telefaona +86 18616918471. Andao hiara-hidinika isika.
Fotoana fandefasana: Des-17-2019